Ejipta: Fisokafan’ny vavahady ifandraisan’i Rafah sy Gaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jona 2011 16:25 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, বাংলা, Português, Ελληνικά, македонски, English
Nizara antsipirihany bebe kokoa ao amin'ny Twitter ilay Mpitatitra Hannah Allam:
Famerana amin'ny fivezivezena any #rafah: tsy misy lehilahy teratany Palestiniana eo anelanelan'ny 18 sy 40 mahazo mankany tsy misy fahazoan-dalana manokana, ireo mpîanatra manana porofo amin'ny fianarana any ejipta ok, ireo vehivavy amin'ny taona rehetra ok
Manampy i @onelittlepixie:
Ny olona ihany no afaka mivezivezy any #Rafah . Mbola voafetra kosa ireo entam-barotra.
Manodidina ny 350 eo ireo mponina nandao an'i Gaza avy eo amin'ilay faritra fivezivezena ao #Rafah androany.
Tsy nampino an'i Damdoma, avy any Gaza, ireo vaovao:
Mikasika ny fisokafan'ny fivezivezena any Rafah. Raha nambara ny 1 Aprily izany, mety nieritreretiko ho lainga. Tena mbola tsy mino aho
Ary koa, avy any Gaza, Ola Anan, nizara fihetseham-po mitovitovy amin'izany. Nitoraka tweet izy:
Ny vaovao rehetra dia momba ny fisokafan'ny Fivezivezena any Rafah. Mbola tanako foana ho vaovao kobaka am-bavan'ny media izany fa tsy misy heviny ankoatra ankoatra izay. Ny tsirairay amintsika dia mila miezaka ary mandeha any mba hahazoana antoka tokoa fa tena nisy ny fiovàna.
Ilay Palestiniana Mahmoud Omar, izay milaza ny tenany ho mpitsoa-ponenana any Kairo, dia mankasitraka ny Revolisiona tao Ejipta tamin'ny fahatanterahana izany:
Misaotra anao ry Ejipta, ireo vahoakanao, ny revolisiona nataonao sy ny fahamendrehanao!
Ny mpitoraka bilaogy Ejiptiana Alaa Abd El Fattah dia manontany am-panesoana:
Rahoviana i Israely no hiantsy ady amintsika? Moa va tsy niteny ny vahoaka fa rehefa misokatra ny fivezivezena any Rafah, hiantsy ady amintsika i Israely? Ary moa va izy ireo tsy niteny fa handefa ny mpampihorohorony aty amintsika i Hamas mba hamotika an'Ejipta. Rahoviana?
Ary mananihany i Mahmoud:
Naheno aho fa rehefa misokatra ny fivezivezena, handany ny fromazy sy ny mofo rehetra (any Ejipta) ny vahoakan'i Gaza. Araka ny hita, mitovy ny vahoaka any Gaza sy ny any Sina na amin'ny isa izany na amin'ny toe-panahy.